Qaamuusyada Ingiriisiga ah iyo DRAE ee khadka tooska ah | Laga soo bilaabo Linux
kudere_missweets | | La cusboonaysiiyay 11/08/2013 14:27 | Aplicaciones
Waxaan rabay inaan dhajiyo sida ereyada looga hubiyo qunsulka mudo dheer, laakiin Elav ayaa ahaa horumarka.
Waxaan si kooban u soo qaadanayaa weedha macalinkii Ingiriisiga ee Elav oo nala wadaagay qoraalkeeda […] Markaad garan weydo erey af ingiriisi ah, ku eeg qaamuuska ingiriisiga, ee ha u helin turjumaan […]
Qoraalkan waxaan ku isticmaali doonaa codsi la yiraahdo sdcv, taas oo ah xariijinta xariijinta taliska ee caanka ah (hadda aan la taageerin) codsiga StarDict. Dabcan, kuwa doonaya inay sidaa yeelaan waxay ku rakibi karaan istiraatiijiyadooda garaafyada midba midka kale. Intaa waxaa sii dheer waxaan soo galiyay qaamuusyada qaar si aysan waqti ugu qaadan in la helo oo ay dhaqso ugu rakibi karaan.
Waxa aan ka jeclahay codsigan ayaa ah inay ku tusayso qeexitaanka dhammaan qaamuusyada la heli karo, markaa waxaad heli kartaa qeexitaanka dhowr qaamuus iyo erey u dhigma oo ku qoran luqado kale ama mid kale oo keliya, iyadoo ku xiran hadba sida loo qaabeeyo.
Qaamuusyada waxaa ka mid ahaa:
Qaamuuska Akadeemiyadda Boqortooyada Isbaanishka (RAE)
Isbaanish Isbaanish ah
Qoraalkan waxaan sidoo kale ku dhejin doonnaa midka uu soo jeediyay Elav boostada aan kuu sheegay, ee ka taxaddar inaadan nuqufin.
1 Rakibaadda Sdcv
2 Ku rakibidda qaamuusyada:
3 Adeegsiga iyo qaabeynta
Uma baahnin inaan u wareejiyo USE-yada oo wax yar baa la rakibay. Dabcan, arrinta USEs waa mid isbadal badan.
Slackbuild ayaa la heli karaa, http://slackbuilds.org/repository/14.0/misc/sdcv/. Waxaan si guul leh ugu rakibey sbopkg, uma baahnin inaan raadsado ku-tiirsanaan dheeraad ah.
Qeybin kale waxay la mid tahay, tusaale ahaan Fedora waxay ahaan laheyd yum rakib sdcv, in loo isticmaalo zypper ee sdcv, iwm ...
Ku rakibidda qaamuusyada:
Hadda waxay sii rakibeen qaamuusyadan.
Adeegsiga iyo qaabeynta
Habka ugu fudud ee loo adeegsado waa iyada oo la qoro sdcv iyo ereyada weydiinta, tusaale ahaan:
isticmaalka: erayada sdcv [OPTIONS]
-h, –ku caawi muuji caawinaadan oo ka bax
-v, – faahfaahinta nooc bandhig ah iyo bixitaanka
Liiska qaamuusyada la heli karo iyo bixitaanka
-u, –use-dict bookname ee raadinta isticmaal kaliya qaamuus magacan buuggan wata
-n, –in-dhexgal loo adeegsan karin qoraallada
–Utf8-wax soo saar waa inuu ku jiraa utf8
-Utf8-galinta sdcv ee utf8
–Data-dir path / to / dir waxay u adeegsataa tusahan dariiqa lagu kaydinayo diiwaanka xogta
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Qaamuusyada Ingiriisiga ka baxsan iyo DRAE ee boosteejada
Wax ku ool ah oo fudud. 100% waa la hirgaliyay
Mahadsanid! (Y) 🙂
Wanaagsan, waxaan raadinayay wax sidaas oo kale ah. Mahadsanid.
U fiirsashada muhiimka ahi waxay tahay markii aan ku rakibay barnaamijka 'Gentoo' kumaan rakibin Gentoo inay adeegsato UTF-8, ereyo lahjad ah iyo ñ tilde mayna aqoonsan.
Salaan! Weligay uma seegi galitaanka bartaada, runtii mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee ku saabsan Linux ee Isbaanishka ah ee aad ka heli karto shabaqa! Su'aal mowduuca ka baxsan (Ulama jeedo tan inay tahay xD galitaan xumo) maxay tahay font aad isticmaasho? (midka lagu arkay cinwaanka garoonka) mahadsanid! Hambalyo Venezuela!
Ku soo jawaab Byron
Ma ahan in balooggu iska leeyahay qof si sax ah, in kasta oo dabcan ay yihiin Elav, gara_KZKG ... Waxaan u maleynayaa in balooggu qof walba u gaar yahay qof walba. Hadda, sawirka uu qoraalkani u taagan yahay waxaa asal ahaan adeegsaday Elav, wuu garan lahaa sida looga jawaabo su'aalahaaga.
Qabashadu waa tayda the ishana waa terminus waxay kujirtaa aur (archlinux)
Xiiso leh, waan isku dayi doonaa.
Hagaag, waan ka helay qoraalkan, qaamuus qadla'aan ah waligood waxba ma yeelin, dhexdoodana waxay ka dhigaysaa wax yar oo gaar ah, waxtar aad u wanaagsan Mahadsanid.
Gebi ahaanba wax ku ool ah oo shaqeynaya. Aad baad u mahadsantahay !!!
Ku jawaab dannlinx
Sawirka meeleynta Carlos Rivera dijo
Mahadsanid, wax badan ayey i caawisay. Isagu had iyo jeer wuu raadinayay tan, terminal-kiisana wuu ka fiican yahay.
Ku jawaab Carlos Rivera
Ku jawaab inaad garaacdo
Waxaan sameeyay tarjumaankayga anigoo adeegsanaya i2e db (waxay kujirtay Debian 4 repo waxaan filayaa).
Waxay leedahay PyQt4 UI iyo cli oo midabbo leh.
goorta terminal-ka aan dhigo
wax u eg
daam (cunug): dics.tar.gz.1: Lama furi karo: Faylka ama galka ma jiro
daam (cunug): Khaladka lama soo celin karo: hadda waan baxayaa
Daamur: Xaaladda ilmaha ee la soo celiyey 2
tar: Khaladka lama soo celin karo: hadda waan baxayaa
inay tahay inaan sameeyo
Waxay ka dhigan tahay ama faylka lama soo dejin, ama waxaa lagu soo dejiyey magac kale.
Maxaad u hubin weyday in dics.tar.gz kugu soo dejisay adiga?
Ama markale isku day?
Hadda oo aan arko sadarka labaad, mkdir waa in loo adeegsadaa xidid ahaan. Way fiicantahay in laga fakaro waxa amar kastaa sameeyo.
Wanaagsan, ma ogidin intee in le'eg howshan gadaal ayey ku laheyd, adigoo sugaya inay soo muuqato.
Aad u fiican, aad uga raaxo badan raadinta macnaha websaydhka.
Waxaan ku biirayaa aqlabiyada waxaanan kuugu mahadcelinayaa qoraalkan cajiibka ah.
Si kastaba ha noqotee, ka dib markii aan raacay talaabooyinka mar labaad ka dib dib u soo kabashadii Debian Testing iyo Xfce, kuma guuleysan inay ka shaqeeyaan. Wuxuu kaliya aqoonsan yahay Oxford, midkoodna kuwa kale. Kahor dib u dhiska wax walboo sifiican ayey u shaqeynayeen, xitaa waxaan lahaa magacyo qaar oo loo qaabeeyey inay la tashadaan kaliya DRAE.
Sidoo kale, waxay ahayd inaan u wareego dics.tar.gz tusaha xiddigta / dic si aan u furo, maxaa yeelay amarrada tilmaamaha ku jira ma heli karo faylka. Laakiin waxa iga careysiiya ayaa ah in qaamuusyada aysan meesha oolin markaan sameeyo sdcv -l, waxay kaliya qoreysaa Oxford.
Waxaan u bedelay rukhsadaha feylasha leh chmod -R illaa + r / usr / share / stardict / dic / si dhamaan isticmaaleyaashu u aqristaan, laakiin waxba.
Fikrado kasta? Aad baad ugu mahadsantahay horay.
Waxaan ku jawaabayaa naftayda, haddii ay dhacdo inay qof caawiso.
Xaqiiqdii, dhibaatadu waxay ahayd mid ka mid ah rukhsadaha, iyo habka lagu xallin karo, in kasta oo aan caadi ahayn, way fududayd:
Kaliya waxaan furay tusaha Thunar oo ah superuser iyo, anigoo hubinaya rukhsadaha faylalka, waxaan ogaaday fariinta oraneysa inaysan iswaafaqsaneyn. Adiga oo gujinaya batoonka si naxariis leh u soo jeedinaya in la saxo khaladaadka wax waliba sidii ay ahaataba ha ahaato.
Waad ku mahadsan tahay fikraddan waxtarka badan leh inaad gacanta ku haysato qaamuusyo. Tani way caawinaysaa.
Waxaan isticmaalayaa Maya 13.00 waxayna ii sheegaysaa inaanan haysan rukhsad maamul oo igu filan, waxaan u baahanahay kaalmadaada maxaa yeelay waxa aan qabtay waa culeys duug ah oo khamri ah. ee guuleysiga Xp.
I caawi Fadlan Salaan !!!!
Jawaab Mario Guillemo Zavala Silva
Impeccable, rakibay oo soconaya 100%.
Kernel: 3.16.3-1.gd2bbe7f-desktop x86_64 (64 bit) Kombiyuutarka: KDE 4.14.1
Distro: openSUSE 13.1 (Dhalo)
Waad ku mahadsantahay wadaagista 😉
Ku jawaab x-man
Aad baad u mahadsantahay! Waxaan raadinayay wax sidaas oo kale ah muddo dheer. Linux iyo habsiin farxad leh!
Ku jawaab glosh
Aad u fiican! Waan isku dayi doonaa. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan haysto qaamuus wanaagsan oo bilaash ah, taasi waa sababta… Khamri, waxaad aadi kartaa m…!
Ku jawaab linuXgirl
Dharka dharka Daniel dijo
Aad u faa'iido badan. Mahadsanid!
Jawaab Daniel qubeyska
waa inaad cusbooneysiisaa maxaa yeelay waxaan helayaa waxyaabaha soo socda:
Ku xiridda dl.dropboxusercontent.com (dl.dropboxusercontent.com) [162.125.48.131]: 443… ku xiran.
Codsiga HTTP ayaa ladiray, oo sugaya jawaab… 404 Lama helin
2017-04-18 14:13:24 QALAD 404: Lama helin.
Aad baa loo qadarin doonaa haddii aad cusbooneysiiso ama aad ii sheegto waxa kale ee dhexdhexaad ah ee aan isticmaali karo
Matthias ee Isha dijo
Waad ku mahadsan tahay casharka wanaagsan!
Kuwa khalad ku dhaca, waxaan dhaafayaa 2 qaamuusyo Isbaanish-Ingiriis iyo Ingiriis-Isbaanish ah oo loogu talagalay halyeeyada aan halkaas ka helay.
Jawaab ku bixi Matías de la Fuente
waxtar badan! waad ku mahadsantahay wadaagis iyo mahadsanid sidoo kale Matías de la Fuente faylasha
Ku saabsan maqaalkii ugu dambeeyay ee la daabacay